Kathmandu24 || 24*7 News In Nepali Language » श्रीमानलाई ढाटेर भतिजासङ घुम्न जादा ह त्या !
श्रीमानलाई ढाटेर भतिजासङ घुम्न जादा ह त्या !
काठमाडौँ, भदौ २० । ललितपुर अल्का अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारी गीता केसीको ह त्याको संलग्न भएको आ शंकामा उनका भतिजा निर्मल केसीलाई प्रहरीले प क्राउ गरेको छ ।
निर्मललाई ललितपुरकोे भैंसीपाटी घरबाट प क्राउ गरेर अनुसन्धानको लागि चापागाउँ प्रहरी कार्यालय पठाइएको ललितपुरका प्रहरी प्रमुख एसएसपी टेकप्रसाद राईले जानकारी दिनुभयो ।अनुसन्धानमा ३९ बर्षीया गीताको घाँ टी थि चेर ह त्या गरिएको हुनसक्ने प्रहरीले अनुमान छ । उनको श व गोदावारी नगरपालिका १०, मुलडोलस्थित लेलेको जं गलमा भेटिएको हो ।
हाल श वलाई पो’ष्टमा’र्टमका लागि पाटन अस्पताल लगिएको छ । मृ तक केसीको श रीरमा धेरै चो’टप’टक देखिएको छैन् ।
भदौ १७ गते श्रीमानसङ अस्पताल जानुपर्ने भयो निस्किएकि ऊनी अस्पताल नगई भतिजा निर्मलसँग ललितपुरको लेले घुम्न गएको खुलेको छ । श्रीमती राती अवेरसम्म घर नआए पछि अर्को दिन उनको परिवारले ह राएको भनि प्रहरीमा निवेदन दिइएका थिए ।
प्रहरी कार्यालयमा निवेदन आएसँगै गीताको खोजीको लागि प्रहरी अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । हिजो शुक्रबार बेलुका ७ बजे तिर स्थानीय वासिन्दाले अल्का अस्पतालको परिचय पत्र सहित ला स देखेको खबर गरेपछि प्रहरी त्यस घटना स्थल तर्फतिर गएको एसएसपी राईले बताए।
मृ तक गीताको दुई बच्चा रहेका छन् । गीता अल्का अस्पतालमा ‘हाउस किपर’ को रुपमा काम गर्थिन । भतिजा निर्मल केसी र उनीबीच केहि बर्षदेखि निकट सम्बन्ध रहेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । निर्मल मृ तक गीताको घरमा आउने जाने गर्थे ।
उनीहरुबीच अरु के कस्तो सम्बन्ध थियो भन्ने बारेमा अ नुसन्धानबाट थाहा हुने ललितपुरका प्रहरी प्रमुख एसएसपी टेक प्रसाद राई बताउनुहुन्छ ।
प्रकाशित मिति September 5, 2020